Fitsapana momba ny fihenana
Tongasoa eto amin'ny pejin'ny quiz izay hitsapana ny fomba fihetsikao.
Valio ny fanontaniana, valiny iray ihany isaky ny fanontaniana. Rehefa vitanao voavaly ny rehetra, tsindrio ny hoe : "View score" mba hahitanao ny valiny.
Rahoviana no tokony hihinan-kanina ?
Fantatrao ve ny fotoana tokony hihinanan-kanina ? Na sakafo maraina io, na atoandro, na hariva, na goûter, na mitsaingotsaingoka aza. Valio ito fanontaniana manaraka ito, valinteny iray ihany, izay tena misongadina be raisina raha manalasala anao. Rehefa vita izay, tsindrio ny hoe "View score" mba hahitanao ny valiny.